छापामार शैलीमा न्यायलयमा आक्रमण, कत्तिको जायज ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
छापामार शैलीमा न्यायलयमा आक्रमण, कत्तिको जायज ?
Posted by Headline Nepal | १८ बैशाख २०७४, सोमबार १६:१६ |
१८ बैशाख, काठमाण्डौँ । हिजो आईतबार सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । नेपाली–काँग्रेस तथा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकारले कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेको हो । एक निश्पक्ष निडर तथा देशभक्त प्रधानन्यायधिशमाथि सरकारको अचानकको कदमपछि अहिले मुलुक गम्भिर परिस्थितिमा पुगेको सर्वत्र बुझिएको छ ।
प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिपछि कार्यपालीका र न्यायपालीकाबिचको दरार बढेको थियो । त्यसका बाबजुत पनि कार्की आफ्नो निर्णयमा अडिग रहि कार्यसम्पादन गर्दै आएकी थिर्ईन् । प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तमा प्रधानन्यायधिश कार्कीको निर्णयलाई सरकारले खुलेर स्वागत गरेको उद्घोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए । तर कार्कीको निर्णय नवराज सिलवालको पक्षमा हुनुपर्ने नेपाली काँग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको रहेको थियो ।
कार्की अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथ सुडान घोटाला प्रकरणको फैसला तयार गर्दैगर्दा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायत आरोपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भएको सूचना न्यायपरिषद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।
आफु प्रधानन्यायधिस भएलगत्तै भष्ट्राचारका मुद्धालाई प्राथमिकता दिएर उनले झन् बढि आशा तथा विश्वास कमाएकी थिईन् । अझ भनौँ भष्ट्राचारका मुद्धामा आफु प्रधानन्यायधिश हुनु अघिदेखि नै उनले केहि पुर्व र वहालवाला मन्त्रीहरुलाई कैद सजायँ तोकेकी थिईन् । प्रधानन्यायधिश भएपछि उनले भ्रष्टाचारलगायत लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू किनारा लगाउन सक्रिय रहिन् । महाअभियोगको पत्र बुझ्नुअघि पनि उनी सुडान घोटालाको मुद्दाको फैसला गर्न व्यस्त थिइन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा उनले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र एउटै खालका न्यायाधीशको इजलास तोकेको आरोप लगाई उनीमाथी महाअधियोग लगाईएको हो ।
किन कार्कीलाई महाअभियोग ?
कार्यकारी अधिकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै कार्कीमाथी अभियोग लगाइएको छ । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको थियो ।
त्यस्तै, कार्यसम्पादन क्षमता कार्कीसँग नभएको विश्लेषण गर्दै उनीमाथी अर्को अभियोग लागेको हो । त्यस्तै व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक–फरक व्यवहार गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाईएको छ ।
कार्की प्रधानन्यायधिश भएता झन्डै एक तिहाइ भ्रष्टाचार मुद्दाहरु फैसला भएका छन् । सानादेखि ठूला खालका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेकाले उनको प्रशंसा हुने गरेको थियो । उनले कठिन परिस्थितिमा लोकमानको योग्यतामाथिको मुद्दा मात्रै किनारा लगाइन्, पुर्वराजपुत्रीलाई दाइजोका रूपमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारकै हुने महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला समेत उनले गरेकी थिइन् । यसबाट उनीप्रतिको विश्वास चुलीँदै गएको थियो । भने उउनीप्रति रुष्ट बन्नेहरु पनि सक्रिय हुँदै थिए ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा तीन साताअघि माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश समेत दिएको थियो ।
प्रधानन्यायधिश भएयता कार्कीले आफ्नो निर्णय तथा अडानमा हुनुपर्नेभन्दा ज्यादा दृढ भएकी थिईन् । यति सम्म कि कतिपय अरुबाठ्ट आएका प्रस्ताव तथा विचारहरु जायज भएको अवस्थामा पनि उनी आफ्नै विचारलाई सहि ठानेर काम गर्थिन, आफ्नै डिपीमा काम गर्थिन् । फलस्वरुप कार्यपालीका तथा न्यायपालीकाबिच दरार उत्पन्न भईनै रह्यो ।
त्यस्तै न्यायपालीकामा कहिलेकाहिँ हुनेगरेका आन्तरिक मनमुटावमा पनि उनी मुछिने गरेकी थिईन् । आफूमाथि आक्रोश पोखेको र वैचारिक असहमति भएको भन्दै उनले केही न्यायाधीशलाई महत्वपूर्ण मुद्दा हेननदिने गरेको आरोप पनि उनलाई नलागेको होईन । यसै विषय पनि महाभियोगमा झल्किएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
कार्कीको आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बानीका कारण नै आज यो परिणाम निम्तिएको बुझ्न सकिन्छ भने अर्कातिर सरकार पनि आवस्यकताभन्दा बढि उत्तेजक हुनु नै यसको परिणाम हो । अझ भनौ उनी खरो स्वभावमा प्रस्तुत हुने गर्थीन् । उनको ठाडो र रुखो स्वभाव प्राय जसोलाई प्रिय हुनै सकेन । सरकारलाई प्रिय हुने त कुरा नै थिएन ।
यस्तैयस्तै विषयलाई लिएर सरकार कार्कीसँग रुष्ट बन्दै थियो । जसको परिणाम स्वरुप सरकारले छापामार शैलीमा यस्तो निर्णय लिएको छ । सरकारको यस्तो छापामार शैलीको निर्णयले लोकतन्त्रको उपहास गरेको स्पष्ट छ । छापामार शैलीमा दर्ता गराईएको महाअभियोगले सरकारमाथी प्रश्न उठेको छ । कार्यपालीकामाथि हस्तक्षेप भएको सोच्ने सरकारले यो सोच्नु पनि जरुरी थियो कि छापामार शैलीले लोकतन्त्रको कुन हदसम्म सम्मान गर्दछ ?
Previousधादिङमा एमालेले सार्वजनिक गर्यो उमेद्वारहरुको नामावली
Nextआर्थिक समृद्धिको रोडम्याप सहित नयाँ शक्तिको घोषणापत्र सार्वजनिक !
उपराष्ट्रपति पुनका नक्कली छोरा पक्राउ
१३ पुष २०७३, बुधबार १८:४८
बालुवाटार ‘बैठक सकारात्मक’ : संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन भए स्वीकार्य हुने मोर्चाको बचन
८ बैशाख २०७४, शुक्रबार १२:२६
‘मधेसीको भावनालाई नसमेटेसम्म संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन’ : राणा
२६ पुष २०७३, मंगलवार १६:११
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सन्धि–सम्झौता नहुने
८ चैत्र २०७३, मंगलवार ०८:४१